Barlamaanka cusub oo ladhaarinayo iyo madaxweyne Gaas oo ku wajahan Muqdisho. – Radio Daljir
Diseembar 15, 2016 1:22 b 0
Muqdisho, Dec 15 2016-Magaalada Muqdisho ayaa waxaa kusii qulqulaya xildhibaanada cusub ee labada aqal ee barlamaanka Soomaaliya oo lafilayo in xasaanaddooda loodhaarin doono maanta ilaa maalinka berry ah.
Sida lagu cadeeyey War Murtiyeedkii kasoo baxay Shirkii u danbeeyey ee Madasha Wadatashiga Qaran Maanta oo khamiis ah ayaa qorshuhu yahay in Magaalada Muqdisho lagu dhaariyo Mudanayaasha Aqalka Hoose iyo kan Sare ee Soomaaliya.
Dhanka kalena maanta waxaa magaalada Muqdisho ku wajahan wafti uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda Puntland oo ka qaybgeli doona kalfadhiga 1aad ee barlamaanka iyo dhamaystirka doorashada.
DHEGEYSO-Mas’uuliyiin kahadlay buugaag kasoo horjeeda diinta Islaamka oo Garoowe lasoo geliyey.